politika fiarovana fiainan'olona - EducationBro Study Abroad Magazine
Izany fiainana manokana politika efa voangona mba tsara kokoa hanompo ireo izay miahiahy amin'ny ahoana ny 'manokana fantatra Information’ (PII) no ampiasaina amin'ny aterineto. PII, araka ny voalaza ao Etazonia ny fiainana manokana sy ny vaovao lalàna fiarovana, dia vaovao azo ampiasaina amin'ny fotoany avy izy, na amin'ny fanazavana hafa mba hamantatra, fifandraisana, na toerana iray ny olona, na mamantatra olona iray amin'ny teny manodidina. Vakio ny fiainana manokana politika tsara ny hahazo fahalalana mazava ny fomba manangona, fampiasana, miaro na raha tsy izany dia mandray ny manokana Information fantatra araka ny namany Sary.
Inona no mombamomba no manangona avy ny olona hitsidika ny bilaogy, habaka na fampiharana?
Tsy fanangonana vaovao avy amin'ny mpitsidika ny toerana na ny tsipiriany hafa mba hanampy anao amin'ny traikefa.
Rehefa isika no hanangona vaovao?
Isika manangona vaovao avy aminao, raha ianao na miditra fanazavana eo amin'ny toerana.
Omeo anay amin'ny feedback eo amin'ny vokatra na ny tolotra
Ahoana no mampiasa ny fanazavana?
Mety hampiasa ny vaovao avy aminao no manangona rehefa misoratra anarana, manao hividy, sonia ho ny gazetinay amin'ny mailaka, mamaly ny fanadihadiana na varotra fifandraisana, Surf ny tranonkala, na mampiasa toerana hafa lafin-javatra sasany eo amin'ny fomba manaraka ireto:
Ahoana no hiarovana ny vaovao?
Ny tranonkala dia scanned tsy tapaka ho an'ny fiarovana lavaka ary hita toetra fahalementsika mba hahatonga ny fitsidihana ny toerana ho azo antoka araka izay azo atao.
Mampiasa tsy tapaka Malware scanning.
Tsy mampiasa ny SSL taratasy
• Isika ihany no manome lahatsoratra sy vaovao. Tsy mangataka izahay manokana na toy ny anarana vaovao manokana, adiresy mailaka, na ny carte de crédit isa.
Moa ve isika mampiasa 'mofomamy'?
Eny. Cookies ireo antontan-taratasy kely izay ny toerana na ny mpanome tolotra ao amin'ny solosaina famindrana ny fiara mafy noho ny Web navigateur (raha mamela ny) izay mahatonga ny tranonkala na ny rafitra mpanome tolotra mba hahafantatra ny navigateur ka nahafaka ary hahatsiaro sasany vaovao. Ohatra, mampiasa mofomamy mba hanampiana antsika hahatsiaro sy ny fandraisana ny zavatra ao amin'ny lisitry ny hovidiana. Ampiasaina ihany koa izy ireo mba hanampy antsika hahatakatra ny safidinao miorina amin'ny teo aloha na ny amin'izao fotoana izao ny asa toerana, izay mahatonga antsika ho afaka hanome anao kokoa tolotra. Koa izahay mampiasa mofomamy mba hanampiana antsika manangona angon-drakitra momba ny toerana aggregate fifamoivoizana sy ny fifandraisana toerana mba hahafahantsika manolotra toerana tsara kokoa ny traikefa sy ny fitaovana amin'ny ho avy.
Mampiasa mofomamy mba:
• Hahatakatra sy hamonjy ny tian'ny mpampiasa ho an'ny hoavy fitsidihana.
• Haharaka ny dokam-barotra.
• Aggregate hanangonana angona momba ny toerana sy ny toerana fifamoivoizana fifandraisana mba hanolotra toerana tsara kokoa traikefa sy fitaovana amin'ny ho avy. Mety koa ny mampiasa itokisana-antoko fahatelo izay manara-maso ny tolotra vaovao izany ho antsika.
Afaka misafidy ny hanana ny solosaina mananatra anareo isaky ny mofomamy dia nalefa, na afaka misafidy ny hiverina eny rehetra, mofomamy. Manao izany ianareo noho ny navigateur fikirana. Koa satria navigateur dia kely hafa, hijery ny navigateur ny Help Menu mba hianatra ny fomba manova marina ny mofomamy.
Raha mitodika mofomamy eny, endri-javatra sasany ho kilemaina. Izany dia tsy misy fiantraikany ny mpampiasa ny zava-nitranga izay hahatonga ny toerana traikefa mahomby kokoa, ary mety tsy hiasa araka ny tokony ho.
Na izany aza, dia mbola ho afaka ny hametraka baiko .
Open antoko famborahana
Tsy mivarotra, varotra, na raha tsy izany dia hifindra ho any ivelany ny antoko manokana Information fantatra raha tsy manome mpampiasa amin'ny filazana mialoha. Tsy tafiditra mampiantrano tranonkala mpiara-miasa sy ny antoko hafa, izay hanampy antsika eo amin'ny miasa ny tranonkala, nitarika ny raharaham-barotra, na ny fanompoana ny mpampiasa, raha mbola ao ihany ireo antoko manaiky ny hitandrina izany vaovao tsiambaratelo. Mety ihany koa ny mandefa ny vaovao raha ny famotsorana dia mety ny manaraka ny lalàna, mampihatra ny toerana politika, na miaro ny antsika na ny olon-kafa’ zo, fananana na ny fiarovana.
Na izany aza, tsy fantatra vahiny vaovao manokana dia azo omena ny hafa antoko for barotra, dokam-barotra, na fampiasana hafa.
Open antoko rohy
Indraindray, amin'ny ny fisainana mazava, Mety ho tafiditra ao isika na hanatitra fahatelo-antoko vokatra na ny tolotra eo amin'ny tranonkala. Ireo antoko fahatelo-toerana dia manana fiainana manokana misaraka sy mahaleotena politika. Noho izany, dia tsy manana andraikitra na madio ny afa-po sy ny fiaraha-mientana ireo toerana mifandray. Na izany aza, mikatsaka ny hiaro ny tsy fivadihana ny toerana sy mandray na Fanamarihana Mahakasika ireo tranonkala.
Ny dokam-barotra Google fepetra Azo fintinina amin'ny Google ny Advertising Principles. Izy ireo dia nametraka ny hanome ny tsara ho an'ny mpampiasa traikefa. ny https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?HL = mg
Google AdSense Mampiasa Advertising eo amin'ny tranonkala.
Google, toy ny fahatelo-antoko mpivarotra, mampiasa mofomamy mba hanompo dokam-barotra eo amin'ny toerana. Google ny fampiasana ny lokony mofomamy mahatonga izany mba hanompo dokam-barotra amin 'ny mpampiasa mifototra amin'ny fitsidihana teo aloha amin' ny toerana sy ny toerana hafa ao amin'ny Internet. Ireo mpampiasa dia mety misafidy-avy amin'ny fampiasana ny lokony mofomamy amin'ny alalan'ny fitsidihana ny Google sy ny Content Network Ad politika fiainana manokana.
Efa napetraky ny manaraka izao:
• Ny Mponina sy ny Interests Tatitra
izahay, miaraka amin'ny antoko fahatelo-mpivarotra toy ny Google mampiasa antoko voalohany mofomamy (toy ny Google Analytics mofomamy) ary ny fahatelo-antoko mofomamy (toy ny DoubleClick mofomamy) na hafa-antoko fahatelo identifiers miaraka izy vao vita angon-drakitra momba ny mpampiasa fifandraisana amin'ny dokam-barotra sy ny dokambarotra fahatsapana fanompoana miasa rehefa mifandray amin 'ny tranonkala.
tombontsoany no nofidiny, avy:
Ireo mpampiasa dia afaka manova ny safidinao ho fomba Google advertises ho anao mampiasa ny Google Ad Settings pejy. -tsy izany, dia afaka misafidy avy amin'ny alalan'ny fitsidihana ny dokam-barotra Network Initiative hiala pejy, na amin'ny alalan'ny fampiasana ny Google Analytics hiala Browser hametraka amin'ny.
California Online Privacy fiarovana Act
CalOPPA no voalohany lalàna-panjakana ao amin'ny firenena mba mitaky vohikala ara-barotra sy ny asa an-tserasera ny mamoaka ny fiainana manokana politika. Ny takatry ny lalàna eny anelanelany tsara mihoatra California mba mitaky izay rehetra olona na orinasa any Etazonia (ary conceivably izao tontolo izao) izay miasa manokana tranonkala manangona fantatra Information avy any California mpanjifa ny mamoaka miharihary politika fiainana manokana ao amin'ny tranonkala milaza ny vaovao tsara rehefa nangonina sy ireo olon-tsotra na orinasa izay no efa nizara izany. – Jereo koa: Sokajy://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Araka ny CalOPPA, manaiky ny izao manaraka izao:
Ireo mpampiasa dia afaka mitsidika ny toerana tsy mitonona anarana.
Raha vao io politika fiainana manokana noforonina, dia hametraka rohy ho azy io eo amin'ny pejy an-trano, na ho toy ny kely indrindra, tamin'ny andro voalohany rehefa miditra pejy manan-danja ny tranonkala.
Afaka Manova ny mombamomba:
• By emailing antsika
• Amin'ny alalan'ny miditra ao amin'ny kaonty
Ahoana no hiatrehana ny toerana Aza Hanara-maso famantarana?
Isika voninahitra Aza Hanara-maso famantarana Ary aza Hanara-maso, fototra Cookies, na mampiasa ny dokam-barotra, rehefa tsy Track (DNT) navigateur rafitra ao amin'ny toerana.
Ve ny vohikala mamela-antoko fahatelo fitondran-tena ampy?
Tena zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa mamela-antoko fahatelo fitondran-tena ampy
CUP (Children Act fiarovana Privacy Online)
Raha ny amin'ny famoriam-bola ny mombamomba avy amin'ny ankizy latsaky ny 13 taona, ny Ankizy Online Privacy fiarovana Act (CUP) ray aman-dreny amin'ny fanaraha-maso mametraka. Ny Federal Trade Commission, Etazonia’ mpanjifa fiarovana ny fahafahana misafidy, manamafy ny COPPA Fitsipika, izay midika ny zavatra mpandraharaha amin'ny vohikala sy ny asa an-tserasera dia tsy maintsy atao mba hiarovana ny ankizy ny fiainana manokana sy ny fiarovana an-tserasera.
Tsy manokana hivarotra ny zaza latsaky ny 13 taona.
Ny Fair Information Practices Fitsipiky ny mamorona ny fototra iorenan'ny lalàna fiainana manokana any Etazonia sy ny foto-kevitra dia ahitana efa nandray anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny angona fiarovana lalàna maneran-tany. Ny fahatakarana ny Fair Information zatra Fitsipika sy ny fomba tokony ho ampiharina dia-dehibe ny manaraka ny lalàna isan-karazany fiainana manokana izay miaro manokana.
Mba ho mifanaraka amin'ny Fair Information Practices dia manaiky hitondra ny manaraka hetsika, tokony ny angon-drakitra tapaka mitranga:
Isika hampahafantatra ny mpampiasa in-toerana amin'ny alalan'ny fampahafantarana
• Ao anatin'ny 7 raharaham-barotra andro
Manaiky koa izahay ho an'ny tsirairay Fitsipika fanarenana izay mitaky fa ny olona manan-jo ara-dalàna hanohy ampiharina ny zo hanohitra tahirin-kevitra hetra sy ny processors izay tsy manaraka ny lalàna. Izany fitsipika izany dia tsy mitaky fotsiny ny olona manana zo hanohitra angon-drakitra ampiharina mpampiasa, fa koa ny olona manana ny fangataham-bonjy amin'ny fitsarana na ny fitondram-panjakana sy sampan-draharaha mba hanadihady / na fitsarana tsy fanajana ny angon-drakitra processors.
AFAKA amin'ny spam Act
Ny CAN-Spam Act dia lalàna izay mamaritra ny fitsipika ho an'ny ara-barotra mailaka, mametraka fepetra ara-barotra hafatra, manome mpandray ny zo hanana mailaka nijanona tsy ho nalefa tany aminy, ary midika avy sazy mafy ho an'ny fandikan-dalàna.
Tsy manangona ny adiresy mailaka mba:
• Alefaso vaovao, hamaly ny fanontaniana, ary / na ny hafa, na fanontaniana fangatahana
• Dingana didy sy handefa vaovao sy ny vaovao farany mikasika ny baiko.
• Alefaso ianao fanazavana fanampiny mikasika ny vokatra sy / na ny asa fanompoana
• Market ny amin'ny mailing list na hanohizantsika ny mandefa mailaka amin 'ny mpanjifa rehefa raharaham-barotra tany am-boalohany izay nitranga.
Mba ho araka ny CANSPAM, manaiky ny izao manaraka izao:
• Tsy mampiasa foto-kevitra diso, na mamitaka na adiresy mailaka.
• Fantaro ny hafatra toy ny dokambarotra sasany fomba antonony.
• Ampidiro ny adiresy ara-batana ny raharaham-barotra na ny toerana foiben'ny.
• Fanaraha-maso mailaka antoko fahatelo-barotra tolotra ho an'ny fanarahan-dalàna, raha misy no ampiasaina.
• Honor hifidy-avy / Unsubscribe fangatahana haingana.
• Avelao ireo mpampiasa ny serasera amin'ny alalan'ny fampiasana ny rohy eo amin'ny farany ambany ny tsirairay mailaka.
Raha amin'ny fotoana rehetra tianao ny serasera avy mandray ho avy mailaka, dia afaka handefa mailaka antsika amin'ny
• Araho ny toromarika eo amin'ny farany ambany ny tsirairay mailaka.
ary dia avy hatrany hamindrana anareo ho avy ALL taratasy.
Raha misy fanontaniana momba izany misy fiainana manokana politika, dia manorata anay mampiasa ny fanazavana etsy ambany.
Khoriva eny an-dalana, 50
Fanovana farany tamin'ny 2016-07-05